Ngokubanzi -Idrafti ekwi-Intanethi | I-Creativos ezikwi-Intanethi (Iphepha 8)
Isinkempe sikaTutankhamun esivela kwi-meteorite
Izazinzulu zibonise ukuba isinyithi esisikrele sikaTutankhamun sivela kwi-meteorite sothusa wonke umntu.
Inkohlakalo kunye nezoyikisayo kule peyinti yeoyile ibizwa ngokuba yi 'Sparrow'
'IGorrión' ngumzobo owenziwe ngobuchwephesha beTrompe kwaye unomyalezo onamandla oshiya kungekho mntu ungakhathaliyo.
Abazobi abathathu beOyile abaFotayo
UChuck Close, uTjafl Sparnaay kunye noRan Ortner ngabapeyinti abathathu abakumgangatho ophezulu ababonisa ubugcisa babo obukhulu ukusukela ngeminyaka yoo-60.
Iipowusta ezintsha zeQela lokuzibulala elinika enye "ukujonga" kwiJoker, Harley Quinn kunye nokunye
IQela lokuzibulala, okanye apha iQela lokuzibulala, liphehlelele ukuthengisa izolo apho sele singathenga iipowusta ezintsha.
Namhlanje uMarilyn Monroe uza kugqiba iminyaka engama-90 ubudala: uthotho olumnyama, ifoto yakhe ebalaseleyo
UMarilyn Monroe uza kugqiba iminyaka engama-90 namhlanje, ke sinqwenela ukwenza irhafu encinci kwisandla somfoti okhethekileyo uMilton Greene kunye nomdlalo wakhe omnyama.
Ikhulu leminyaka le-V lokusweleka kukaBosco, iminyaka engama-500 yee-enigmas
Ngomboniso oqale izolo, iMyuziyam yasePrado isikhumbuza ikhulu leminyaka V lokusweleka kukaBosco, umzobi oqaqambileyo ozele ziimfihlakalo.
Ilivo lokufota uMcCurry wafumanisa ukuba wayephazamisa iifoto zakhe zentsomi
Ubuqhetseba bokufota ifoto kaMcCurry, elinye lamabali okufota, oye wasebenzisa uninzi lweefoto zakhe ngeFotohop.
Ukuguqula isigebenga ngolutsha uLara Wirth
U-Lara Wirth ngumculi we-makeup oneminyaka eli-16 ubudala onomdla wokutshintsha abe zizilo zasebusuku.
Umntu ubeka iiglasi phantsi komyuziyam kwaye iindwendwe zacinga ukuba bubugcisa
Iiglasi zabekwa emhlabeni, kwaye iindwendwe ezininzi zacinga ukuba ziyinxalenye yomboniso weSan Francisco Museum of Modern Art.
UMakiko Futaki, i-Studio Ghibli animator, usweleke eneminyaka engama-58
UMakiko Futaki, ngaphandle kokusebenzela i-Studio Ghibli kwiifilimu ezinjengeNkosazana uMonoke, naye ubekwangumdlali odumileyo waseKatsuhiro Otomo ka-Akira.
I-Zootopia ngokusesikweni yeyona bhanyabhanya yesibini iphambili kwimbali yeDisney
I-Zootopia ngokusemthethweni ibe yifilimu yesibini ephezulu yeDisney. Ifilimu yoopopayi yabo bonke abaphulaphuli.
Iintloko zabantu kwiigalari ezincinci zobugcisa
Ngomncinci, unokuba yinkwenkwezi yegalari eyaziwayo yobugcisa ngenxa yomboniso osebenzayo ophakanyiswe nguGabunia.
Iifoto ezintle zokutshona kwelanga kwizitrato ezingenanto zaseTokyo
Kwifoto ka-Bohbot yezitrato zaseTokyo singafumana umbala omkhulu kunye noxolo kwezo ndawo zasedolophini zesi sixeko sikhulu.
Umzobi obonisa ukukhanya
Ungathatha imifanekiso yokukhanya? UCrisco, umzobi wemvelaphi yase-Italiya usishiya singathethi ngomsebenzi wakhe wokubonisa. Uyamazi? Qhubeka ufunda!
Amabali e-surreal axelwe ngeefoto zobuqu zikaMichal Zahornacky
Igama lakhe nguMichal Zahornacky, kwaye ikwanguye kuphela umfoti wobugcisa oqeqeshiweyo eSlovakia.
Iifoto ezithandekayo zikaSzilvia Schaffer
U-Szilvia Schaffer akanguye umntu onamagama amaninzi, kwaye umntu wakhe wathi ukufotwa akufakwa kwimisebenzi yobugcisa
UBanksy ungena ebhotwe eRoma
I-Banksy izakubonisa, ukusuka kwiintsuku ezimbini kude kube yinyanga kaSeptemba, i-150 isebenza kwibhotwe laseRoma. Igcisa elichasene nenkqubo eliyinxalenye yalo
Inkqubo yobugcisa ebizwa ngokuba yi-'Inceptionism '
Ukusuka kwiwebhusayithi yaseRussia ebizwa ngokuba yi-Ostagram, abasebenzisi benza umfanekiso wababini abadityaniswe kuthungelwano lwe-neural kunye nobuchule obubizwa ngokuba yi-Inceptionism.
Umyili waseNew York u-Blank William uphinde wazichaza iimfazwe zokulwa ezinqabileyo njengothotho lwezixhobo zobundlobongela.
Imizekeliso enemiyalezo yalo mbhali kunye negcisa, apho iintyatyambo kunye positivism zimbini zeempawu zakhe eziphambili.
Lo mzobi waseBrazil unikezele kwaye wathumela ezi logo zodumo ngokungathi ziibhaluni ezinokufota ezinokudlula njengezidadayo.
Ukuba usebenza ngokuzimeleyo osebenza ekhaya, okanye uyilo elisebenza eofisini, udinga ixesha lokuba wedwa uyile
UJirka Väätäinen ngumzobi onesiphiwo ozimeleyo kunye nomzobi wegraphic owazalelwa eHelsinki, eFinland. Okwangoku ikomkhulu layo ...
Iti sesona siselo sidumileyo emhlabeni emva kwamanzi. Ngokwe-UN (FAO), iikomityi zibhiliyoni ezintandathu zisela imihla ngemihla
Lo mculi utsale i-191 League of Legends yintshatsheli kwiiyure ze-131, yenye yezona zinto zidumileyo ze-MOBA zangoku kwaye zaziwa kwi-eSports
Ngaba uyayazi incwadana ye-analog eguqula imizobo kunye nemizobo ngaxeshanye? Qhubeka ufunda!
Umzobi wase-Dutch ufumene i-inki ene-fossilized eneminyaka engama-95 yezigidi apho wayepeyinta i-octopus engapheliyo.
Umfoti ongumNgesi u-James Mollison uhambe umhlaba efota abantwana kunye namagumbi abo okulala
U-Anna Bucciarelli ngumzobi ozimeleyo ngoku ohlala kwaye esebenza eToronto, Canada. Uphumelele isidanga se-BA (i-Honours) kwi-Graphic Design evela kwiYunivesithi yaseYork
Umzobi omncinci uViktoriya Kravchenko uzobe ii-watercolors zeminyango kwihlabathi liphela, ekhumbula ukuba iingcango zinokuba yimisebenzi yobugcisa nayo
UMatthieu Robert-Ortis uphakamisa umfanekiso oqingqiweyo owenziwe ngentambo oya kuthi, ngokuxhomekeka kwindlela ojonga ngayo, utshintshe ukusuka kwindlulamthi uye kwindlovu.
Umzobi uJaime Molina usebenza ngemilinganiselo emi-2, 2,5 no-3, eguqulela ubuhle bakhe kwimizobo emikhulu ...
Iifoto zokudlala zaseScotch Trooper ezinxibelelana nolwelo oluntsundu ngeembonakalo ezahlukeneyo
Ukuba ufuna ukuya kubona umsebenzi wobugcisa eFrance, mhlawumbi awunanto ngaphandle kokuhamba ngololiwe wayo uyokuncoma omnye wabapeyinti bayo.
Kule cawa umzobi uPaul Fryer ubeka enye yezona zinto zoyikekayo ngokuthatha uSathana ngokwakhe embeke kwesi sithuba esingcwele kuninzi.
IWoork Co yindawo yokuyila yaseSpain enophawu lwentengiso njengenye yeendlela zayo ezikhethekileyo kwaye apho unokubona into entsha.
Wazalwa ngo-1988, eJamani. UJohannes Voss ngumzobi kunye nomzobi wedijithali ovela eLeipzig, kwaye ubungakanani bakhe buyamangalisa ngokwenene.
UCyril Rolando uneminyaka engama-28 kwaye usebenze njengengcali yeengqondo zonyango iminyaka emi-6. Ngoku uhlala kumazantsi eFrance.
Ngaba wakha wahlangabezana nengxaki yokunyaniseka kumthengi wakho? Funda kwaye ufumanise ubuxoki awusebenzisa kakhulu!
ICinema Palettes yiakhawunti yeTwitter ekwabelana ngemibala yemibala bhanyabhanya njengomthombo wokukhuthaza abanye.
IiSimps zisasaza inkqubo ebukhoma kwaye ngoku siyazazi iimfihlo kunye nenkqubo eyayisetyenziselwa ukwenza usasazo.
Umzekeliso wase-Estonia u-Eiko Ojala uzisa imeko encomekayo yobunzulu kunye nokuthungwa kwimifanekiso yakhe yokuhlela
Umzobi owazalelwa eHawaii kunye nomzobi wasesitalatweni uSean Yoro (aka Hula) udale uthotho olunomtsalane ...
U-Octavi Navarro ngoku usebenza noGilbert kumdlalo wevidiyo yakhe ye-adventure entsha apho ubugcisa be-pixel buthabatha inqanaba eliphambili ngokubonakalayo.
UHoffline ungumfoti okhethekileyo kuloyiko osebenzisa abantwana bakhe njengabadlali abaphambili kwiifoto zakhe.
Umzobi u-Anne Mondro ubeka ubugcisa entliziyweni ngezi ntliziyo zimangalisayo zichanekileyo ngokwendlela yokwakheka komzimba
Ngaba uyazi ukuba yeyiphi inkqubela phambili yetekhnoloji kwicandelo lethu? Ungaphuthelwa kwezi zixhobo!
UDina Brodsky ngumzobi waseNew York obenomdla wokuzoba imithi iminyaka emininzi ngoku.
UPaglia usithatha ithutyana ngemizobo yakhe engathandabuzekiyo apho abamnyama nabamhlophe banobungangamsha obukhulu ekunikeni umsebenzi wakhe amandla amakhulu.
UJoseph A Lopez Vergara, ligcisa elineminyaka engama-21 ubudala elizinze eSouth Texas elidale uthotho lwemizobo yamehlo entle kunye neyoqobo.
Ucinga ntoni nge logo entsha eboniswe sisikhululo seLos 40 Principales?
UDi Piazza usizisa komnye wemisebenzi yakhe esinokuyisebenzisa ngokugqibeleleyo ukuthetha ngegama elithi horror vacui. Umzobi okhuthaza isitayile se-tenebrist
I-Red Turtle yimveliso yentsebenziswano yaseFranco-Japan ngumlawuli uMichael Dudok de Wit apho iStudio Ghibli ibonelele ngenxalenye yenkxaso-mali kunye nombono.
Umzobi uJason Mercier ngomnye umntu onobuchule osebenzisa izixhobo zeApple, kwaye mhlawumbi ikwanguye kuphela oza kubetha iMac ngomsebenzi wakhe.
U-Akira Kurosawa ngumlawuli wefilimu wehlelo owayedlala ngokugqibeleleyo kwaye iinkalo zakhe zibandakanya ukupeyinta kunye neebhodi zebali.
UMariko Kusumoto ligcisa laseJapan elinotyekelo olukhulu lwezacholo ezenziwe ngelaphu eliguqukayo, njengoko olu luhlu lubonisa.
Uyilo lwezixhobo luhlaziywa kunye nezikhokelo zoyilo zabaphuhlisi benkampani yesithathu ukuba bafake izicelo kwii -apps zabo nakwiimveliso zewebhu.
Uyilo olutsha lwe-Instagram logo lufumene ukugxekwa kwaye ngoku umyili oyintloko eze ngaphambili ukuyikhusela.
Ukurhangqa iirakethi endaweni yokuziqhelanisa nazo, uDanielle Clough usebenzisa intambo eshinyeneyo ukwenza imifanekiso enemibala emininzi yekhala kunye nezinye izilwanyana zasendle kwiirakethi zetenisi
Ukusuka kwezona nkcukacha zincinci zichazwe kumacandelo aqhekekileyo esakhiwo esinamabali amaninzi, igcisa laseDatshi uCollin van der Sluijs uveza "ulonwabo lomntu
Igrafiti kunye nepeyinti efakela ubuchwepheshe, uburharha, kunye nendalo ye-'Wes21 '
Ngoburharha kunye nolawulo olugqwesileyo lwesitshizi, umculi waseSwitzerland uRemo Lienhard (aka Wes21)
I-PolyWood luthotho lwamanani enziwe nge-3D kwisitayile esinepoloni esezantsi esivumela unyango olubonakalayo ngaphandle kokunyanzelisa ukubalwa kwepoligoni kwizixhobo zekhompyutha.
UTilen Ti ngumculi waseSingapore oye waba yingcali ekusebenziseni iipeyinti ze-watercolor kwizakhono zabo.
Le ibekwe eNew York ibonisa amandla okujonga lo mculi waseChile ogama linguDasic Fernández ohlala kwesi sixeko.
UJolita Vaitkut uyilo kunye nomzobi, ovelisa kwaye enze iingcinga ezingaqhelekanga. Uyaziwa ngokukodwa ngokudala ubugcisa
I-Instagram ihlaziywe ngokupheleleyo kwi-logo ukubonisa utshintsho olwenziwe kwiminyaka yakutshanje kwaye ngenxa yoko ubulele uluntu lwayo.
U-lngel Villanueva usisa kubusuku bemilingo yaseParis kule peyinti yeoyile apho athabatha khona umoya wobusuku baseParis.
Umculi waseHouston uNatalie waseIreland wenza imizobo emihle ngesixhobo esingaqhelekanga, ukwanga
Ungazenza njani ngempumelelo iifayile zethu ngaphandle kokuchitha ixesha elininzi? Ngomlingo weVector!
Umzobi onomdla omkhulu we-impressionism kwaye osebenzisa iminwe yakhe ukupeyinta le mibala inemibala kwaye idlamkile.
UPstrong uphendula ngelinye lawona macebiso obulumko anokunikwa umntu ofuna ukubhala ibali okanye incwadi.
Umzobi wase-Singapore u-Keng Lye wenza imifanekiso eqingqiweyo efana nezilwanyana, ipeyinti, i-resin kunye nembono entle
UDino Tomic, umzobi onetalente we tattoo oseCroatia kodwa ehlala eNorway, uthanda ukwenza imizobo eyiyo xa engabathinti abathengi
Amajoni omkhosi wamajoni avela kwi-Star Wars asetyenziswa nguCallahan kolu ngcelele lubizwa ngokuba yiGalactic Warfighters ukuzama ukubenza babe ngabantu.
UBailey ngumzobi onesimo esikhethekileyo sokulungisa iinqanawa ngobuchule bamandulo baseJapan obusebenzisa intambo yegolide.
Ibhola ekhatywayo ihambisa abantu kwihlabathi liphela kunye nokuthanda kwalo mculi waseColombia owondla abadlali bebhola abaziwayo okwangoku.
U-Elliana Esquivel ngumzobi oneminyaka eli-19 ubudala ohlala eNorth Carolina, eUnited States
Ibhiya yeGuinness inelogo entsha eyenziwe yi-Design Bridge, yenye yezona studio zaziwayo ziseLondon. Le yinkqubo yokuyila.
Uzalelwe eSydney (Australia) ngo-1959, kodwa wakhulela emazantsi eFrance. UGil Bruvel waqala ukuzama ubugcisa eneminyaka eli-9 kunye noyise
Umyili wemizobo wasePoland, umzobi kunye nomyili osetyiweyo u-Igor Morski okwangoku ujolise kubugcisa begraphic yemithombo yeendaba
Ukudityaniswa okumangalisayo kwamaqebengwana omtshato oqobo kwaye ngaphezu kwako konke, kuyahlekisa kakhulu.
Nangona uJoshua Abarbanel esebenzisa i-laser ukusika iinkuni, iziqwengana zakhe zemifanekiso eqingqiweyo yamatye e-coral kufanelekile ukuba zichazwe.
UVictoria Kravchenko usisa kwizitrato zasePortugal ngothotho lwee-watercolors apho abonakalisa ubuchule obukhulu kunye nombala omkhulu.
UChema Madoz owazalwa ngo-1958, eMadrid, ngumfoti owaziwayo waseSpain owathi ngo-2000 waphumelela 'uMvuzo weSizwe wokuFota'
Uyila njani ilogo? Yeyiphi eyona nkqubo ibalaseleyo yokudala esinokuyilandela ukuze sifumane ezona ziphumo zibalaseleyo?
Imida ayisoloko inxulumene nobugcisa kunye noyilo, kodwa xa kuziwa ekudaleni uphawu lwe-minimalist, zinokubakho.
U-LeMay usisa kumfanekiso apho ngalinye lamaqhekeza akhe lenziwa ngamakhulu emifanekiso ayiqokelele kwiikholaji.
I-DuoGraph ngumatshini wokuzoba wamva nje kumqambi kunye nomyili uJoe Freedman, 'oMatshini wokuDweba iCycloid' owenza isaqhwithi se-intanethi.
Njengoko u-Olga Kuraeva echaza nge-Instagram, umdaniso wakhe "awuyiyo ifilosofi, okanye umsebenzi", kodwa yindlela yokubonisa imvakalelo
ULucy Ungumculi wedijithali osisa kubomi bemihla ngemihla kunye nobomi obonwabisayo obunemifanekiso eyahlukeneyo ayivelisayo kwiAdobe Photoshop yakhe.
Iiklasi ezimbini zabantu kolu ngcelele lwemifanekiso eyenziweyo nguRocha ukuchonga izinto ezizodwa nganye nganye.
UKent MacDonald uphefumlelwe ngamahlathi achumileyo apho ahlala khona eVancouver Island, kwaye uwasebenzisela ukuhlakulela ubomi obumibalabala obungaphakathi endlwini
Umzobi waseJapan, oyinxalenye yeqela labadali abangama-40 beLego, ukhuthazekile ukuba enze oku kutya ngezicucu zeLego.
I-Bamboo Stylus Duo sisitayile seWacom ekuvumela ukuba uchaneke ngakumbi kwaye uzive ungcono xa uzobe kwaye ubhala kwithebhulethi okanye kwi-smartphone.
Ngosiba olumnyama, ukuthanda indalo kunye nobugcisa obusezandleni ungafumana olu luhlu lwemizekelo ekhuthazayo.
Kwi-90s bekukho imixholo ephindaphindayo ethi isebenzise ukuvela kweenkqubo zoyilo lwegraphic ezineziphumo ezithile.
Igcisa lase-Itali lifaka iinkwenkwezi zaseHollywood kunye nemizobo yeklasikhi ukufumana esi siphumo sothusayo nesibangela umdla.
U-Lia Melia unesitayile esithile kwi-abstract yokwenza ezi marinas zisisa phambi kwamandla kunye namandla olwandle kumaza alo.
Ubomi bukaSusanna Bauer busisa kweminye imifanekiso eqingqiweyo apho amagqabi omileyo zezona ziphambili.
UZac Gorman usebenzisa ii-GIFs zoopopayi ukubonelela ngamabali akhe ngamacandelo athile ophilayo ukukhulisa ixesha elibalulekileyo elihlekisayo.
Igama lakhe nguClaudia Maccechini (Claudym) kwaye ungumculi waseNtaliyane onomdla wokubonisa iimpawu zenkcubeko kwi-Microdetails.
Ukufota kukaRobert Clark kusisa kwiinkcukacha zeentsiba zeentlobo ezahlukeneyo zeentaka azibonakalisa ngendlela ebalaseleyo.
UMarshennikov ngumzobi waseRussia oye wadlula kwesinye sezona zifundo zidumileyo ehlabathini. Umnqweno wakhe kubafazi uyabonakala kwimizobo yeoyile yakhe.
UJeremy Mann unokukuphazamisa ngenxa yesimbo sakhe esithile esimsahlula kwabanye abazobi beoyile kunye nemisebenzi yakhe ekhethekileyo.
Umzobi uFaiza Maghni owazalelwa e-Oran, eAlgeria, ngumzobi ozifundisayo onomdla kubugcisa besizwe, izinto ezincinci zasePersi kunye nomzobo wangoku.
Kwiminyaka engamashumi amabini ananye, umzobi u-Aliza Razell wenza amalinge ngeendlela ezahlukeneyo zokudala imisebenzi yakhe yobugcisa
UAlex Grey ngomnye wabathetheli bentshukumo yengqondo kunye nomculi ohloniphekileyo onemifanekiso emininzi.
Ukuba ubugcisa be-pixel yinto yakho, iTrixel yinethiwekhi entsha yenethiwekhi ejolise kolu hlobo lobugcisa bekhompyuter kunye nobugcisa obukhethekileyo.
Amawele azinze eTutín. Ukabani igama ledrafti yoyilo yeVan orton, yenza yonke ingcinga yobugcisa ngempumelelo kwiglasi enamabala
UBourilhon ngumfoti wezobugcisa onembono enkulu yokujonga kunye nokucinga okukhokelela kwezi ndlela zokufota.
I-Millennium Falcon ka-Darth Vader, i-X Wing okanye i-TIE Fighter eboniswe kolu ngcelele lwenziwe nguJenssen emva kweminyaka elishumi yokusebenza.
Ukusuka kwi-1978 ukuya kwi-2013 iNkosana yatshintsha iinwele zayo malunga namaxesha angama-36 kwaye babonisa isidima esikhulu ekufumaneni iindlela zabo kunye nesizathu sokuba.
Ubisi ligcisa elidibanisa isiphithiphithi sento ejikeleze abo bafazi bahle abapeyinta phantse ukufikelela kufototoalism.
USalisbury ngumzobi ekuthiwa ubizwa ngokuba yi-baritas ene-predilection enkulu yokusebenzela ikofu yobugcisa
Umzobi wamanzi wasePoland uMaja Wronska uyaqhubeka nokupeyinta ukubonakaliswa kwemibala ngaphakathi koyilo lwaseYurophu
UMark Ferrari ubonakalisa kwinkomfa ezinye zezona ndlela zibaluleke kakhulu kwipikseli nakwizobugcisa obubonakalayo be-retro, inefashoni ngoku.
ILing "iHongkong" ngumzekelo womsebenzi wedijithali kunye nendlela imvula enokutolikwa ngayo ngeFotohop kumzekeliso.
Yintoni eyayiza kubonakala ngathi imifanekiso kaGustav Klimt ebomini bokwenene? Qhubeka ufunda!
UJane Radstrom uyasothusa ukuba kutheni le ingalo yesithathu ikumgangatho wepeyinti ekumgangatho ophezulu "uSam", umsebenzi obuthathaka kwaye mhle.
Ukukhethwa kwezona zimemo zomtshato zentsusa kwiwebhu.
Umzekeliso kaHunt "woMhla woMgwebo"
UCaza ngumzobi osebenzela imagazini eyaziwayo yaseMelika ethi "Heavy Metal" kwaye ngubani obuyayo wasizisela isiqwenga esichazayo
/ Uyenza njani i-css3 yesitayile sendawo ngendlela efanelekileyo kunye nengcali? Qhubeka ufunda!
UMateyu Simmonds ngumzobi osekwe eCopenhagen owenza imizobo emincinci, irotunda, iintsika, kwimarble namatye
ULedonne ligcisa lobucwebe elenza ezi medali zikhethekileyo apho iimfihlo zendalo iphela zifihlwe ngaphakathi.
UChristopher Lovell ngumculi wase-UK ojolise ikakhulu kumzekeliso weempahla kunye neenkampani ezithengisayo.
Igcisa eliseLos Angeles (uJedediah Corwyn Voltz) wakha izindlu ezincinci zemithi ezisongelwe kwizityalo zangaphakathi okanye kwimithi yebhonsai
U-Enomoto usithatha ngenkangeleko yakhe kunye nokufota kwakhe kwizitrato zaseTokyo kwezo mifanekiso mihle mibini yokuvezwa.
U-Emi Nakajima ligcisa elineminyaka engama-21 ubudala laseJapan, elazalwa ngo-1995 ngoFebruwari 4, owenza imizobo eyakhayo yoyilo
Yenziwe lilungu elinamalungu ali-150 elihlangeneyo elibizwa ngokuba yi-Meow Wolf, amava enkcubeko ahlala kwindawo ye-bowling elahliweyo eSanta Fe, eNew Mexico.
UAfarin Sajedi ligcisa laseIran elifuna ukukhuthaza ukuqonda kwakho, iimvakalelo zakho kunye nezinye izinto zobomi bakho ngemifanekiso yakhe.
Njengengxenye 'yeCelestial-Series' yakhe, igcisa ledijithali esekwe eChicago uDavid Brodeur wenza umhlaba ongaqhelekanga
UJohn Alvin wayengumboniso obalaseleyo wepeyinti yemifanekiso bhanyabhanya yaseHollywood owayesebenzela iBlade Runner, ET I-Extraterrestrial kunye nezinye ezininzi.
Ukulinganiswa kwe-R kumele umxholo onamandla kwaye yeyona inikezelwe kwifilimu yoopopayi uBatman: Ihlazo lokubulala.
Yintoni omele uzigcine kuwe kwaye ungabelani ngayo nomyili wakho? Qhubeka ufunda!
Indalo kaHanna-Barbera iya kuvuleleka kubo bonke xa ifilimu yakhe yokuqala yoopopayi ene-SCOOB ivula ngo-2018
UMorski yindoda ekhanyisiweyo yasePoland esibonisa imiba ethile kunye neembono zoluntu lwanamhlanje esijamelana nayo mihla le.
Ngaba ufuna ukuziphindezela kumyili wemizobo? Qhubeka ufunda!
Uzalelwe kwaye wakhulela ePotsdam, eJamani (1984) Matthias Haker uxhotyiswe nge-SLR yakhe ngalo lonke ixesha, kodwa ulonwabo lwakhe lokuqala ngolokuqala…
Ngaba ujonge ukuphinda uqalise ukuyila ngaphambi kokuqalisa ukukhangela umsebenzi? Qhubeka ufunda!
Irose ngumsebenzi okhethekileyo wokubonisa nguAlexei Antonov onokuthi ufunde kuwo ngokusebenza ngokukhanya kunye nengqikelelo yayo kule ntyatyambo.
UKazuo Oga uyasonwabisa ngemali yakhe kwezinye zeefilimu ze-Studio Ghibli ezinje ngePrincess Mononoke okanye uMmelwane wam uTotoro.
ILa Sexta ihlaziya umfanekiso wayo ngokudibanisa izinto ngokuwenza lula uphawu lwayo. Ukubetha okanye ukuphosa?
UTomasz Alen Kopera upeyinta ioyile kwinqwelo. Ubume bomntu kunye neemfihlakalo zendalo iphefumlelwe mihla le. Imizobo yakhe igcwele iisimboli ezihlala zihambelana nengqondo yomntu kunye nolwalamano lomntu kwihlabathi elijikelezileyo.
Esi sibini samagcisa sixuba izimbo ezahlukeneyo kwiitattoo zabo ukwenza ezizodwa kunye nezasekuqaleni kakhulu ukubonelela ngento eyahlukileyo kubaxumi babo
Yenzelwe ividiyo yomculo kaJane Bordeaux's Ma'agalim, esi siqwenga somfanekiso we-3D ngumsebenzi omkhulu ngomyalezo omkhulu
Incwadi enemibala yabantu abadala enikezela indlela ekhululekileyo nenobuchule yokuhlola umhlaba nguSteve McDonald
Imifanekiso eqingqiweyo yobhedu kaDe La Vega ibamba loo ntshukumo kunye nendalo ekubonakalisweni kwaba bantwana kwimiboniso yabo yemihla ngemihla.
I-Azul Obscura ithatha iinqwelomoya ezihlala zigqitha zingabonakali ngabagibeli abaqhelekileyo abadla ngokuthatha ezi nqwelo moya
Iiprojekthi zomthetho weLouse ufakelo lwamawaka eentyatyambo ezinje ngale ibizwa ngokuba yi "Garten" kwaye oko kusibeka phambi kwepanorama ekhethekileyo
UJohansson ligcisa lokukhohlisa elona njongo yalo iphambili kukuphazamisa ingqondo yakho kunye nokumba kwezakhe izimvo nemibono.
Ngezibane ezingama-50.000 XNUMX uMunro ujika intlango eyomileyo e-Australia ibe yintsimi yamaphupha apho sinokuvula khona iingcinga zethu size sivumele iingcinga zethu zibhabhe.
U-Soosh ngumculi omncinci kakhulu osibonisa ukuba uchukumise kakhulu kwi-watercolor kolu luhlu lwemifanekiso ebetha ngamandla
Ngubani ongabakhumbuli abalinganiswa basentsomini abatshabalalisa umlingo kumabonakude wentambo ngeCartoon Network? Bafundisa ...
Ukuyila kunye nokuqala kunokuvela kwifenitshala yasesitalatweni ukuze sihlekise kunye nomzuzu ongalindelekanga wolonwabo
UCinzia Bolognesi, umfoti onetalente kunye nomzobi ovela e-Itali, okwaziyo ukudubula ubuhle bendawo, wenza imifanekiso eyahlukileyo ...
UTiffany Turrill wenza imifanekiso emnandi kwizembozo zeencwadi zabantwana, iincwadi zemifanekiso, imidlalo yokudlala indima, imidlalo yebhodi kunye…
UHenn Kim usisa kubomi bemihla ngemihla bezinto ezininzi kunye nabantu abafanayo abadlula kubomi bethu bemihla ngemihla
UFrançois Brunuelle uyasimangalisa ngale projekthi apho ahlanganisa khona abantu abangaziwayo abafanayo. Qhubeka ufunda!
U-Léo Caillard yinxalenye yesi sizukulwana sitsha sifotayo, esisebenza ngombono ongaqhelekanga. Kude…
Incwadi yokufaka imibala nguRafael Araujo, umbonisi weVenezuela kunye nomyili wezakhiwo, ozisa imathematics ngokugqwesileyo kwiKickstarter
Iimpawu ezintsha zikaGoogle zokudlala zibeka uphawu lwembonakalo kumbala kwaye zibonise indlela uGoogle aqhubeka ngayo ukuzihlaziya.
U-Luqman Reza okanye waziwa ngcono emhlabeni njengo 'jongkie' igcisa nomzobi wase Kota Wisata Batu, Indonesia
Sebenzisa ioyile ngokwayo ukumisa amanqwanqwa kunye neencopho zendlela elungileyo yokufumana iziphumo ezilungileyo njenge 'sol 23'
Umsebenzi wobugcisa wokuba ungalambi: Inqanawa eyaphukileyo ibonisa ukukhula kwabalinganiswa ukusuka kwimizobo yokuqala ukuya kwisiphumo sokugqibela kulwandiso
Usebenzisa amakhulu eeyadi zocingo, umzobi u-Edoardo Tresoldi wakhe utoliko lwecawa yokuqala yamaKristu eyakhe yema kwindawo yayo yangoku yaseSiponto.
Ubugcisa bukaMichael Wilkinson bumele yonke into entle kwaye entle emoyeni womntu, esebenzisa eyona nto ukusibonisa amathuba ebomini
Ukufumana uDory ngumboniso bhanyabhanya omtsha weDisney Pstrong oya kuthi ubethe iithiyetha zethu ehlotyeni kwaye ulandelelwano lokufumana iNemo.
U-Aniko unomdla omkhulu kwaye oku kudala izigqubuthelo zeencwadi ezikhethekileyo ngobuchule obukhethekileyo obwenza iqhekeza ngalinye lahluke.
UMichael okwabizwa ngokuba nguMoerkey ngumzobi waseHorsham, eVictoria (Australia). Ingcibi enetalente yenza iibhola ezizodwa ezenziwe ngezandla, izitya kunye nemifanekiso eqingqiweyo kwizitshixo ezilahliweyo kunye neengqekembe
UTal Peleg ligcisa lobugcisa elinobuchule obuninzi bokuyila osebenzisa amehlo akhe ukusisa kwiimovie, umculo kunye namabali adumileyo.
UBen Heine usizisela umzabalazo ongunaphakade phakathi kweplastiki kunye nedijithali, ipensile kunye nekhamera kolu luhlu lubizwa ngokuba yi 'Pencil vs Camera "
U-Murad Osmann ngumfoti wezithombe oye waguqula amanethiwekhi kunye neprojekthi yakhe. Ufuna ukubona?
U-Isabell Kiefhaber ngumculi waseJamani odale uthotho lwamakhonkco aneempawu ezincinci ezibalisa amabali amancinci
UHeather Theurer usandula ukupapasha uthotho olutsha malunga noAlice kwiWonderland olusisa emsebenzini sinento embi.
Yintoni ozijonga njengeelogo ezimbi embalini? Ngaba zikhona iilogo ezibi kakhulu kunale?
UPeter Coulson wazalwa ngo-1961 kwaye uhlala eMelbourne (e-Australia), uPeter Coulson ngumfoti kunye nomenzi wefilim ojolise kwezokuhlela, ezemfashini, ezomfanekiso kunye nobuhle bokufota.
Ukuthanda uVincent yifilimu yokuqala yoopopayi yokupeyintwa ngokupheleleyo kwioyile esekwe kubomi bomzobi oqaqambileyo waseDatshi uVincent Van Gogh
UMathias Zamecki ligcisa eliphakamisa uthotho lwemifanekiso engaqhelekanga yefilimu yoopopayi engekhoyo ephefumlelwe yiStudio Ghibli
Imifanekiso eqingqiweyo ka-Andy Goldsworthy iphelelwe lixesha kwaye i-ephemeral ukuze ngeentsuku zinyamalale phambi kwethu ziphawula eyazo imbali
I-OpenToonz yisoftware esetyenziswa yiStudio Ghibli kunye nochungechunge lweFuturama kwaye ngoku ifumaneka simahla kwiGithub.
Inyani yile, abaqulunqi begraphic banokuba yinto engaqhelekanga. Hayi? Qhubeka ufunda!
Ngaba ujonga iiflaya zobungcali zeholide yasentwasahlobo? Qhubeka ufunda!
Iimeko zefowuni eziphathwayo zinokwenziwa zobuqu ngeendlela ezininzi, kodwa entwasahlobo ezi zenziwe yiNdluOfBlings zilungile.
U-Aibek Almassov ngumakhi waseTurkey ocebe indlu enamabhubhu ukuba ibekwe embindini wehlathi. Iya kuba yinyani xa ufumana inkxaso-mali
Akukho nto ikhuthazayo njengamaqweqwe eencwadi, awucingi? Nika ingqalelo kwezi!
I-zoo yasezidolophini sesona siphakamiso sikhulu sobugcisa sikaJulien Nonnon, igcisa lokubonakalayo eliguqula ubusuku baseParis
U-Olivier Valsecchi ngumfoti wase-France owazalwa ngo-1979. Wafunda ukufota kwi 'ETPA School of Photography' eTououse, eFrance.
Ngomzuzu lo mzobi usibonisa ukuba ungawenza njani umzekeliso wedijithali ngeAdobe Illustrator kwaye ufumane ukugqiba okuhle
Ukufota kukaHernandez kusisa kwezinye izinto ezinobuchule eziguqula iithoyi ezincinci kuthotho olukhulu lweefoto
UMarina Bychkova usisa kwezi popi zintle ze-porcelain eneenkcukacha ezintle kwaye zenziwe ngezinto ezikumgangatho ophezulu
IMint Vinetu yivenkile ethengisa iincwadi kwidolophu elikomkhulu laseLithuania eyayinombono oqaqambileyo wokusebenzisa "umkhono" weli phulo liphumeleleyo lentengiso.
Ngaba uyafuna ukufunda incwadi elungileyo kule holide? Apha sikubonisa iincwadi ezili-100 ezinkulu!
I-DeepDream yinethiwekhi ye-neural eyenziwe nguGoogle ekhangela iimilo ezifundwe ngaphambili. 'IiOrenji zegazi' zidlule kule nethiwekhi.
I-Toonz, isoftware yoopopayi esetyenziswa kwi-Futurama kunye ne-Studio Ghibli bhanyabhanya, iya kukhululeka nge-26 kaMatshi
UJason Waldron wakhulela kumbindi weOregon apho wafaka khona uxabiso olunzulu ngezilwanyana zasendle kunye noluntu lwendalo.
IStudio Siyamthanda uEames wenze esi sibane sikhethekileyo sezityalo esizisa okuluhlaza kwiindawo ezivaliweyo ngaphandle kwelanga ngqo. Ikhethekileyo kubaqulunqi.
U-Kuciara ngumzobi osebenzele iDisney kunye ne-Columbia Pictures phakathi kwabanye kwaye usisa kulo msebenzi ubizwa ngokuba "nguThixo wase-Egypt"
Ukuba unesixhobo se-Android unokwenza amabali amancinci opopayi nge-Draw Draw My Story app ngokongeza imifanekiso, iifoto, imizobo kunye nokunye
U-Brett Walker usishiya simangalisiwe ngamehlo akhe kunye nezo mifanekiso zithatha eyona nto ibalulekileyo kulowo ubeka iifoto zakhe kwindawo yaseLondon.
U-Lee usizisa kumagama aguqulwe aba ziimpawu ezinemilo ekhethekileyo enika intsingiselo enkulu. Unencwadi yakhe eAmazon.
Zaziza kuba njani izivakalisi zeemveliso ezinkulu ukuba bezinyanisekile? Nika ingqalelo kwezi mashups!
UGrégoire Guillemin oneminyaka engama-48 ubudala "uLeon" uyala ukuvumela inkanuko yakhe yobuntwana iphele ngokuzolileyo kwixesha elidlulileyo
Iminyaka engama-271 eyadlulayo igcisa lixube laza lachaza yonke imibala onokucinga ngayo encwadini enomsebenzi wokufundisa olingana nesikhokelo sombala wePantone
UMarco Escobedo nguMlawuli wezoBugcisa onamava kummandla we-Graphic Design, emva kokuphumelela njengoMlawuli wezoBugcisa, wenze umsebenzi wakhe kwiinkampani ezininzi eLima ezinxulumene nomhlaba woyilo.
Ingcongolo isizisela imilebe yakhe njengeyona mpahla iphambili yazo zonke iintlobo zoburhabaxa, imizobo kunye neepateni emsebenzini wokuqala
Nokuba umzekeliso wedijithali kaMehl Amundsen kunye nabalinganiswa ababonisiweyo ngumzekelo omhle wolu hlobo lwefomathi oluvelisa iziphumo ezintle.
Inkqubo ye-Adobe 'Project Comet' iye yabizwa ngokuba 'yiAdobe Experience Design', kwaye ukujonga kwangaphambili ngoku kuyafumaneka kuye nabani na ...
Sikuzisa umbonisi uAdnan Ali, umbonisi onetalente enkulu apho adibanisa khona ukuzithemba kwakhe, okwenza ...
Ngaba ujonga i-PNG yasimahla yokufaka abalinganiswa kunye nezinto kwiiprojekthi zakho?
UDaniel Keys usithatha ngeendlela zokuphila, imihlaba kunye neefoto kumgca wakhe okhethekileyo kunye nomoya awudalelayo.
Igcisa ledijithali elinomsebenzi onokuba yinxalenye yamaqweqwe emidlalo yevidiyo engenakubalwa kwaye onomdla omkhulu kumnandi
URobert noShana Parkeharrison basithatha basiqonda izinto ngokufota. Umsebenzi oza kulandela kwiwebhusayithi yayo enemisebenzi eyahlukeneyo kwaye elungileyo kakhulu
I-Goncalves isisa kwihlabathi liphela ngohambo olwenzileyo apho yathatha khona iifoto zeewindows kunye neengcango ezivela kwimimandla emininzi
Ii-doodle ze-3D eziphantse zavela kwiphepha ngenxa yesiphumo sevolumu kwaye imibimbi ikwabonelela ngombono
UMichal Bieganski umfoti onombono othile kufutshane nokuziqhelanisa neefoto esinokuzibona kwiwebhusayithi yakhe
I-Unchained yingqokelela yemifanekiso eqingqiweyo yenja yentsimbi kaNirit, umyili wefashoni osandula ukusebenzisa izinto ezihlaziyiweyo
UNimmalaikaew ngumculi waseThai oneminyaka engama-33 ubudala osithatha ngaphambi kokungaboni kakuhle kuluhlu lweziqwenga zobugcisa apho kubonakala khona i-3D
UMark Powel unesitayile semifanekiso yakhe yokuxuba kunye nemizobo yezilwanyana kunye neemephu zeediliya, iimvulophu kunye neeleta.
UJason Freeny unalezi zilwanyana eAmazon ukuze azithenge. Ezinye izinto zokudlala zingaqhelekanga kwaye loo nto ityhila ubume bomzimba
UPatrick Kramer usibonisa ubuchule bakhe obukhulu bokupeyinta ioyile ngalo msebenzi wekhwalithi esemagqabini esinokongeza kwabanye abaninzi kwibala lakhe
Ngaba ufuna iincwadana zespanish zezinto ozithandayo? Funda ngokufunda i-Photoshop, i-Illustrator, i-Indesign kunye nokunye!
Ngaba uyafuna ukuziqhelanisa nesiphumo esiphambili se-chroma kunye neevidiyo zobungcali? Qhubeka ufunda!
UKorehijo Hino ubonakalisa ubumnandi kubanda, into engaqhelekanga, ubumnyama kwaye ilizwe elonwabileyo likaHuxley kwipeyinti yakhe.
U-Chien Chung Wei usibonisa ubunjani bakhe obukhulu kubuchwephesha kwi-watercolor kunye nala mhlaba asibonisa ubume bawo
I-WWF isungule iphulo lokwazisa malunga nengxaki yeoyile yesundu kunye neziphumo zayo e-Indonesia
Ayizukuba lixesha lokugqibela lokuba sizokufumana izandla zomculi usebenzisa iikeyiki okanye ...
U-Aleksey Savchenko usizisa eRashiya yasebusika kwimizobo yeoyile yakhe enomoya womoya.
UGoogle unesicelo esikhethekileyo sokuzoba kwinyani ebonakalayo enikezelwa yi-HTC ngesixhobo sayo seVive. Le yiTilt Bruth
UKay Pike ngumzobi wepeyinti yomzimba osibonisa inguqu yakhe ibe ngabantu abathandwayo abahlekisayo beMarvel
UDada usibonisa ukuthanda kwakhe iDisney neMiyazaki kolu luhlu lweemashup apho uza kufumana khona abalinganiswa beempawu
U-Aaron Tilley ucebisa uthotho lweefoto ezibonisa loo maxesha ngaphambi kokuba kwenzeke into eyintlekele kwaye ebangela uxinzelelo xa ubabona
Esi sibini sinomdla omkhulu ngokufanayo: ukudala izidalwa ezintle ngeenkcukacha ezinkulu kunye nomsebenzi ogqwesileyo.
UCecilia Levy uhlaziya kwaye uguqula iincwadi ezindala ukuze aziguqulele kuzo zonke iintlobo zamacwecwe, izitya kunye neekomityi kunye nesiphelo sokuqala esihle.
Imigca Pop ka-Iggy Pop ehamba ze kwiklasi yokuzoba yobomi equlunqwe yiMyuziyam yaseBrooklyn apho ilivo ledwala libonakala njengemodeli
Umbono kwinto ephazamisayo uTalaikene enza ngayo umsebenzi wakhe wokubonisa, apho i-acrylic ibonakala.
UPang Moakun ngumculi waseTshayina apho ikhekhe kunye nebhinqa badibana khona ngokukhethekileyo
UVicente Romero ubonakalisa indlela ekhethekileyo yekhekhe kumsebenzi ngamnye awenzayo, njengoko kusenzeka ngolu hlobo luthandekayo
Ukunyuka kwesiphepho ngumzobi wedijithali osibonisa ingqalelo yakhe ekhethekileyo engqondweni nakwingcinga ngalo msebenzi.
Ngaba utsaleleka kwiimpawu ezingalunganga? Namhlanje sikuzisa ukhetho oluhle! Qhubeka ufunda!
U-Elena Sai, ngala mantombazana amnyama, usisa kwitalente yezobugcisa esemgangathweni omkhulu wokupeyinta kwidijithali.
Umdlalo weZihlalo zobukhosi luthotho lweTV olunempumelelo kakhulu apho omnye wabazobi bayo bekwabelana ngebhodi yamabali
UZaria Forman ungowabo bazobi bachaphazelekayo ngendalo esingqongileyo nalapho umsebenzi wakhe ufunyanwa kumhlaba onqabileyo ngonyango olukhulu
I-Tordesillas ngumzobi waseSpain onesimo esikhethekileyo seoyile, igrafite kunye nomntu obhinqileyo kweyona ndawo intle.
Ziya kujongeka njani iilogo zezona nkampani zidumileyo xa zityhila ezona mpazamo zazo? UMarco Schembri uyasifundisa.
Iminyaka eli-100 yokuvela kweZombi, zonke zikwividiyo nakwimifanekiso
I-Adobe ekugqibeleni ifumana ukuxhonywa kwayo kwaye kubonakala ngathi izinikele ekuboniseni uthando ngakumbi ku…
UVicente Romero ngumzobi ovela eMadrid obonisa umdla omkhulu kumfazi kunye nezipho ezinkulu kwi-pastel.
Ukususela namhlanje unokufikelela kwiwebhusayithi yeVan Gogh Museum ukufikelela kumsebenzi wenkosi yaseDatshi kwifomathi ye-HD.
Iziyobisi ziyichaphazela njani imbono yenyani kunye nomsebenzi wobugcisa? Qhubeka ufunda!
Umzobi ovela e-Oviedo onomdla omkhulu wentsimbi kunye nentsimbi ukwenza amanani abantu kunye nezilwanyana.
Ngaphandle kokuhonjiswa, u-Chloe Giordano naye unesimo esikhethekileyo se-3D njengoko kubonisiwe kwiwebhusayithi yakhe.
Ngaba uWilson ngumzobi oza kulandela kwaye ayothuswa bubuchule bakhe bobugcisa bokuphinda abambe umhlaba ngokuchukumisa kwakhe.
URosanes usibonisa umgangatho wakhe wobuchwephesha kolu ngcelele lwemifanekiso yezilwanyana ebizwa ngokuba "Zizilwanyana zeJometri"
U-Szabó ngumculi ohlawuliswe kulo nyaka ngokubonisa iifilimu ezintlanu ezazityunjelwe owona mfanekiso mhle kwii-BAFTAs.
Yintoni ebonakala ngathi abalinganiswa abadumileyo bobuntwana bethu ebomini bokwenyani? Qhubeka ufunda!
I-NASA ibonelele ngeeposta zasimahla ezili-14 eziza kukuhenda ukuba uphuphe ngokuhamba emajukujukwini
UAaron Paul ngomnye ophambili ophambili kuthotho lweecandelo Ukuqhekeka Okubi. Olunye kuthotho lweTV olugqwesileyo ngalo lonke ixesha apho lo mdlali enc